Fianarantsoa: Mitaraina amin'ny vidin'ny lafarinina ny mpampiasa izany
mercredi, 05 juillet 2017 21:58
Taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny kafe dia ny lafarinina indray izao no mampimenomenona ny mpanjifa.
Mpivarotra, mpahandro sakafo, mpanamboatra mofo, samy mitaraina avokoa fa niakatra 150 000 Ar ny vidin'ny lasaka iray aty Fianarantsoa.
Nisondrotra roa avo heny izany satria 70 000 Ar ny vidiny teo aloha.
Hatreto dia tsy misy filazana manamarina ny tokony hampiakarana io vidiny io avy amin'ny tompon'andraikitry ny varotra. Tsy manana ny heriny tahaka ny any andrenivohitra rahateo ny mpitantana ny Ascoma eto an-toerana ka tsy misy itarainana ireo mpanjifa izany akora izany.
Ambaran'izy ireo fa mpivarotra iray monja no mivarotra azy io eto Fianarantsoa ka manararaotra amin'ny fampiakarana ny vidiny. Betsaka ny olona mampifandray izany amin'ny fitokonan'ny mpiasan'ny fadin-tseranana izay ahatsapana fiatraikany amin'ny fikorinan'ny akora tahaka itony.
Miaritra mangina ireo mpividy izany eo ampiandrasana ny fepetra ho raisin'ny fitondram-panjakana.
Sambava: Misokatra androany 20 jona ny tsenan-davanila maitso aty SAVA
Monnaie: Les nouveaux spécimens dévoilés »
Legally Stendra Best Buy Medicine Pharmacy Discount For Plavix Cialis E Viagra Online [url=http://buyvarden.com]levitra expre delivery[/url] Amoxicillin For Sinus Precios Cialis Alicante Propecia Pill
lundi, 02 octobre 2017 09:28